SP-USB02 SOICARE USB cool mist aromatherapy ultrasonic différant de car auto diffuser, China SP-USB02 SOICARE USB cool mist aromatherapy ultrasonic essentielle fiara diffuser mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Sunpai Industries Limited
SP-USB02 SOICARE USB cool mist aromatherapy ultrasonic différant fiara misy menaka
SOICARE USB cool mist aromatherapy ultrasonic différant fiara misy menaka
Boaty loko + Polyfoam
· 2-in-1 DIFFUSER OIL-TAO FIASA: Raha ampitahaina amin'ny fanamorana fiara hafa, ny diffuser menaka fiara USB dia vita amin'ny akora PP tsy mahazaka harafesina izay mamela anao handatsaka solika tena ilaina mivantana ao amin'ity diffuser ity. Ho fanampin'izay, ity moisturizer ultrasonic ity dia hahatonga ny menaka havoana haingana kokoa ao anaty rano. Rehefa mankafy ny zavona mangatsiatsiaka ianao dia hanana fialamboly aromatherapy mahafinaritra ihany koa.
· MANDROSO NY DOMBITRA DOBA: Dingana roa natao. Tena mety ho an'ny tariby USB ny tehirizina ao amin'ny faran'ity diffuser aromatherapy ity. Mora ny mampandeha ity diffuser ity, kitiho aloha hanombohana ny zavona, faharoa hamonoana ny loko ary ny fahatelo hampiatoana ny fampiasana azy.
· PORTABLE QUIET HUMIDIFIER: Ity dia moisturizer kely azo entina, azonao entina mora foana amin'ny toerana tianao io. Hevitra tsara ho an'ny biraon'ny fitsangatsanganana an-trano fatoriana ho an'ny fiara an-trano ny trano fandroana zaza. Ary ny tabataba miasa dia tsy hihoatra ny 30db. Tsy hahatsapa fikorontanana mihitsy ianao rehefa mitondra fiara matory na mianatra.
· Jiro fahazavana 7-COLOR LED: Jiro miloko 7 mampiseho, hodiovin'ny fiara ity hamindra tsikelikely ny lokon'ny hazavana miaina mandritra ny asa, azo safidiana hovonoina araka ny safidin'ny tena manokana. Tsy diffuser menaka tena ilaina fotsiny izy io, fa safidy tsara koa handravahana ny fiara ao amin'ny efitranonao sy ny biraonao.
· FANATONANA tsy misy rano: ny diffuser an'ny fiara ultrasonikantsika dia afaka mitazona rano 60ml ary miasa mandritra ny 6 ora hatrany. Hikatona ho azy io rehefa misy rano kely sisa tavela, izay afaka misoroka ny fitaovana tsy ho simba.
Diffuser huile essentielle fiara USB
fotsy / mainty
12-16 ml / ora